Fitsaboana ny fahatakarana famakiana amin'ny Aphasia - fiofanana kognitive
Ny fitsaboana ny fahatakarana famakiana amin'ny aphasia
Ianao izao: Home » Articles » aphasia » Ny fitsaboana ny fahatakarana famakiana amin'ny aphasia
Theaphasia aretina ara-pitenenana izay miseho amin'ny fanovana na ny fahazoana ny fiteny am-bava na an-tsoratra. Izany dia mitranga indrindra aorian'ny ratra amin'ny ati-doha na tapaka lalan-dra ary mety hiteraka fahasarotana amin'ny fahazoana mamaky teny ihany koa. Vokatr'izany dia matetika ny olona manana aphasia no miaina fihenan'ny fiainana.
Ny tsy fahampian'ny famakiana dia samy hafa amin'ny fisehoany sy ny fanovana ifotony. Izy ireo dia mety hitranga amin'ny famakiana mafy na amin'ny fahatakarana izay vakina, na amin'ny resaka teny tokana na lahatsoratra iray manontolo. Ankoatra izany, ny antony mahatonga ny tsy fahaizana mamaky teny dia samy hafa: afaka miahiahy momba ny fomba fiasa ara-piteny na leksika izy ireo, ary koa mifandray amin'ny fanovana ny sehatry ny kognita.
Talohan'izay dia maro ny fitsaboana novolavolaina hamahana ny olan'ny famakiana. Ny fampiharana paikady metacognitive no iray neken'ny besinimaro; izany dia ahafahan'ny mpamaky miatrika ny tsy fahampiana fahazoana mamaky saingy tsy naseho ny manazava ny valin'ny fitondran-tena sy ny fikendrena ny fitsaboana ny fahatakarana famakiana amin'ny ambaratonga ho an'ireo olona manana aphasia.
Amin'ny taona 2018 Purdy ary ny mpiara-miasa dia nanao famerenana rafitra ny literatiora momba ny olana amin'ny fahatakarana lahatsoratra amin'ny aphasia sy ny fitsaboana mifandraika amin'izany. Manokana, karazana fitsaboana efatra no noheverina:
Fitsaboana amin'ny famakiana mafy: natsangana mba hanatsarana ny fahatakarana amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny famakiana mafy amin'ny olona miaraka aminy aphasia ahitsy-mafy
Fitsaboana mifototra amin'ny paikady: natao hanatsarana ny fahatakarana famakiana; miovaova arakaraka ny fanamarinana kalitao sy fananganana. Toa fitsaboana mandaitra ho an'ireo olona malemy fanahy izany aphasia na fahasarotana amin'ny fahatakarana famakiana.
Fitsaboana kognitive: mifantoka amin'ny antony ifotony, ohatra ny olan'ny attenzione o fitadidiana miasa, izay tompon'andraikitra amin'ny fahasahiranana amin'ny famakiana. Mampiseho fanatsarana ny olona miaraka aminy izany aphasia antonony sy ambaratonga ny sisa fahaizana mamaky ny lahatsoratra.
Fitsaboana ara-pitantanana: dia fitsaboana vakiana mifototra amin'ny fanazaran-tena amin'ny solosaina araka ny voalazan'ny Kartz sy Wertz. Ny asan'izy ireo dia hanaporofoana fa ny fitsaboana amin'ny famakiana ampiasain'ny solosaina dia tsy vitan'ny famakiana fotsiny fa amin'ny hetsika fiteny tsy famakiana hafa.
Ny valin'ny fanadihadiana statistika ny kalitaon'ny fandalinana voadinika dia miovaova be. Na izany aza, ireo mpanoratra ny fandinihana rafitra dia nitatitra fa ny fitsaboana ny famakiana mafy io no ho henjana indrindra amin'ireo fomba fiasa misy ary mampiseho ny tenany ho mety mahavita manatsara ny fahazoana mamaky.
Hisy koa porofon'ny fahombiazan'ny fitsaboana amin'ny famakiana herinaratra miorina amin'ny solosaina, fa ny ambaratongan'ny fahombiazana sy ny fanatsarana eo amin'ny vondrona dia samy hafa be tokoa amin'ny fanadihadiana isan-karazany natao tamin'ity fomba ity.
Purdy sy ny mpiara-miasa dia mamintina izany ny famakiana mafy ny fitsaboana dia toa mitarika amin'ny fanatsarana lehibe indrindra amin'ny olona aphasia am-pasana, raha ny fomba hafa kosa dia hampiseho fahombiazana bebe kokoa amin'ireo olona manana tsy fahampiana famakiana maivana sy antonony. Ny fitsaboana ambiny, izany hoe ireo mifototra amin'ny paikady, fitsaboana kognitika, ary fitsaboana hierarchika, dia nahomby tamin'ny fanatsarana ny fahazoana mamaky teny, saingy ny vokatra dia tsy mifanaraka. Mazava fa ny fahasamihafana betsaka amin'ny mpandray anjara, ny protokolan'ny fitsaboana ary ny fahasarotana amin'ny fanandramana dia mety hisoroka ny fehin-kevitra ankapobeny tsy ho voasarika momba ny fahombiazan'ny fitsaboana manokana ho an'ny olona tsirairay manana aphasia.
Amin'ny ho avy, ny fanadihadiana mifehy ny fitsaboana manokana mikendry ny tsy fahatakarana famakiana dia mety hanatsara ny fahatakarana ny isan'ny mponina aphasia. Raha raisina ny safidin'ny mpandray anjara, ny hamafin'ny fitsaboana sy ny fomba fitsaboana henjana dia afaka manatsara ny kalitao sy ny fahombiazan'ny fahazoana mamaky teny amin'ny aphasia.
Ny fahombiazan'ny teknolojia vaovao amin'ny fitsaboana ireo anomalie aorian'ny stroke
Fitsaboana kabary ho an'ny aphasia aorian'ny fikorontanana: mahasoa ve izy io?
Aphasia sy fanarenana amin'ny laoniny tele. Ny fitambaran'ny fiofanana kognitive sy ny fiofanana amin'ny fiteny
Avereno alefa ny fanoratana amin'ny alàlan'ny… WhatsApp
Aphasia - CIAT vs M-MAT: iza no tsara kokoa?
Katz, RC, & Wertz, RT (1992). Fitsaboana amin'ny famakiana hierarchika amin'ny alàlan'ny aphasia. Aphasiology, 6(2), 165-177.
Purdy, M., Coppens, P., Madden, EB, Mozeiko, J., Patterson, J., Wallace, SE, & Freed, D. (2019). Fitsaboana fahatakarana famakiana amin'ny aphasia: famerenana rafitra. Aphasiology, 33(6), 629-651.
aphasia, aphasia sy fahatakarana lahatsoratra, Famerenana aphasia, fanarenana ny fahatakarana ny lahatsoratra
Ny fitsaboana ny fahatakarana famakiana amin'ny aphasia2020-09-112020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/il-trattamento-della-comprensione-della-lettura-nellafasia.png200px200px
Ny fahombiazan'ny teknolojia vaovao amin'ny fitsaboana ireo anomalie aorian'ny strokeAphasia, Fanarenana
Telerehabilitation ho an'ny aretim-pitenenana ho an'ny olon-dehibeAphasia, Lahatsoratra